जापानमा आफ्नो भिसा आँफैले कसरी स्पोन्सर गर्ने ? | Nepali In Japan
जापानमा आफ्नो भिसा आँफैले कसरी स्पोन्सर गर्ने ?
October 14, 2019 March 17, 2021
जापानमा भिसा सम्बन्धित धेरै जानकारीहरु हामीहरुले लेखिसकेका छौं । सायद तपाईले ति पढ्नुपनि भएको छ । छैन भने हाम्रो वेवसाइट हेर्न सक्नुहुन्छ । आजको यस लेखमा हामीहरुले इमिग्रेशन अफिसले कसैले थाहा नपाउने गरी लुकाएर राखेको कुरा बताउन गइरहेका छौं ।
वर्किङ भिसा हासिल गर्ने प्रक्रिया झट्ट हेर्दा अलि सरल हो कि भन्ने लाग्न सक्छ । व्यवहारिक रुपमा यो भिसा पाउन सरल नभएपनि सिद्धान्तगत दृष्टिकोणमा भने यो सजिलो छ । यसका लागि तपाईले केही कामहरु गर्नु पर्छ । जस्तैः एउटा फुलटाइम जागिर खोज्ने । आवश्यक कागजपत्रहरु पेश गर्ने अनि अन्तिम निर्णय कहिले होला भनेर कुर्ने आदि ।
तर तपाई फ्रिलान्सरको रुपमा काम गर्न थाल्नु भयो । तपाईले गरिरहेको फूल टाइम काम छाडेर विभिन्न रोजगारदाताका लागि पार्ट टाइम काम गर्न थाल्नु भयो भने के हुन्छ ? यसको अर्थ तपाईले वर्किङ भिसा लिनै पाउनु हुन्न भन्ने हो त ?
तपाईका मनमा यस्तै खालका विभिन्न जिज्ञाशाहरु होलान् । तर पिर मान्नु पर्दैन । यस्ता अवस्थाहरुमा समेत तपाईको वर्किङ भिसा सुरक्षित राख्ने एउटा उपाय छ । अब तपाई सोच्नु होला के यो सम्भव छ ? आजको यो लेख पूरै पढ्नुहोस् ।
जापानले फूल टाइम मात्रै होइन पार्ट–टाइम काम गर्ने र फ्रिलान्सिङ गर्नेहरुलाई पनि स्वागत गर्ने गर्दछ।
कहिलेकाँही तपाईलाई एउटै रोजगारदाता कहाँ लामो समय फूल टाइम काम गर्न मन नलाग्न पनि सक्छ । आफ्नै खुट्टामा एक्लै उभिने, आफैं आफ्नो मालिक बन्ने, आफैं स्वतन्त्र भएर काम गर्नेेबारे तपाईले कहिल्यै सोच्नु भएको छ ? तपाई अहिले फ्रिलान्सरको रुपमा काम गरिरहनु भएको छ वा स्थिर आय आर्जन हुने खालको विभिन्न पार्ट–टाइम कामहरुमा आबद्ध हुनु भएको छ भने पनि तपाईले नियमित वर्किङ भिसाको लागि आवेदन दिन सक्नु हुन्छ । तर इमिग्रेशन अफिस जानु अघि तपाईले थाहा पाइराख्नु पर्ने केही कुराहरु छन् । जुन निम्नानुसार छन्ः
आवेदन दिने क्षणमा तपाईसँग वैधानिक (म्याद गुज्रि नसकेको) वर्किङ भिसा हुनु पर्छ । यसको अर्थ के हो भने आफैले आफ्नो भिसा स्पोन्सर गर्ने प्रक्रिया त्यति बेला मात्रै सम्भव हुन्छ जतिबेला तपाई आफ्नो विद्यमान भिसा नवीकरण गर्न इमिग्रेशन अफिस जानु हुन्छ । तर यसो भन्दैमा तपाईले पहिलाकै वर्किङ भिसामा अड्किनु पर्छ भन्ने होइन । तपाईले त्यतिबेला भिसामा हेरफेर गर्न सक्नु हुन्छ ।
आफैले आफ्नो भिसा स्पोन्सर गर्ने कुरा सबै खालका भिसामा लागू हुँदैन । यसका लागि निश्चत क्षेत्र तोकिएको छ । उदाहरणका लागि तपाई कलाकार हुनु हुन्छ, पत्रकार हुनुहुन्छ, अनुसन्धाता वा इञ्जिनियर हुनु हुन्छ, मावनीय वा अन्तरराष्ट्रिय सेवामा संलग्न विज्ञ वा दक्ष सिपयुक्त श्रमिक हुनु हुन्छ भने मात्रै तपाईले आफ्नो भिसा आफैले स्पोन्सर गर्न पाउनु हुन्छ ।
यसका लागि तपाईले वार्षिक रुपमा कम्तिमा ३० लाख येन कमाउन सक्छु भन्ने प्रमाणीत गर्नु पर्छ । यो कुरा प्रमाणीत गर्न तपाईले कम्पनीसँग मात्रै होइन व्यक्तिसँग भएको करार समेत देखाउनु पर्छ । यो शर्त पूरा गर्न व्यक्तिहरुसँग पनि करार पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ । मानौं तपाई निजी रुपमा काम गर्ने शिक्षक हुनुहुन्छ भने तपाईले आप्mना हरेक विद्यार्थीहरुसँग करार पत्रमा हस्ताक्षर गर्न सक्नु हुन्छ ।
यो भिसा अन्तर्गत तपाईले गर्न चाहने सबै कामहरु एउटै वर्गमा पर्नु पर्छ । तपाईसँग मुख्य रोजगार दाता हुनु पर्छ अनि अनि यो एउटा कम्पनी हुनु पर्छ ।
जापानी कम्पनीहरुबाट कमाउनु पर्ने भनेर तोकिएको आवश्यक तलब कमाउने हैसियतमा हुनु हुन्छ भने तपाईले विदेशी कम्पनीहरुसँग हस्ताक्षर गरेको करार पत्रलाई पनि आफनो अतिरिक्त आम्दानीको रुपमा पेश गर्न सक्नु हुनेछ ।
माथि उल्लेख गरिएका आवश्यकताहरु पूरा गर्नु भएको छैन भने तपाईको आवेदन अस्वीकृत हुनेछ । त्यसैले इमिग्रेशन अफिस हतारिएर गएर ४ हजार येनको टिकट खेर फाल्नु भन्दा अघि यी सबै कुराहरु दिमागमा राख्नु होला ।
आवेदन दिनका लागि के–के कागजपत्रहरु चाहिन्छ ?
आफ्नो भिसा आफैले स्पोन्सर गर्ने भनेर दिने आवेदन नियमित खालका आवेदन भन्दा खासै फरक हुँदैनन् । नियमित खालका भिसा आवेदनका लागि तपाईले एउटा कम्पनीले दिएको कागजपत्रहरु मात्रै पेश गर्नुपथ्र्यो । तर सेल्फ स्पोन्सरसिपका लागि भने तपाईले हस्ताक्षर गर्नु भएको सबै करार पत्र अनि तपाईको वित्तीय अवस्था (आम्दानी) पूष्टि गर्ने सबै कागजपत्रहरु ल्याउनु आवश्यक छ । यसका लागि चाहिने आधारभूत कागजपत्रहरु निम्नानुसार छन् :
– उचित तरिकाले भरिएको आवेदन फारम
– पासपोर्ट (३ बाई ४) आकारको फोटो । यो फोटो आवेदन दिनु भन्दा ६ महिना भित्र खिचिएको हुनु पर्छ ।
– तपाई आवद्ध हुन थाल्नु भएको काम वा क्रियाकलाप उनीहरुबाट तपाईले पाउनु हुने तलब, तपाईले काम गर्नु पर्ने घन्टा र रोजगारीको अवधि देखाउने करार पत्र ।
– तपाईले अहिले काम गरिरहनु भएको पार्ट–टाइम रोजगारदाताले दिएको 在職証明書 (रोजगार प्रमाणपत्र)
– तपाईको पूर्व रोजगारदाताले दिएको 退職証明書 (अवकाश पत्र)
– तपाईले आफ्नो वित्तीय दायित्वहरु पूरा गरिरहनु भएको छ भन्ने देखाउन給与所得源泉徴収票 (अघिल्लो वर्ष तपाईको तवलबाट कटाएर कम्पनी आफैंले सरकालाई झुक्तानी गरेको आय कर ‘विदहोल्डिङ स्टेटमेन्ट’) वा त्यस्तै खालको कागजपत्रहरु । आफूले सरकारलाई तिर्नु पर्ने कर भुक्तानी गर्न नबिर्सनु होला । विदेश मामिला मन्त्रालयले कर नतिर्नेहरुप्रति दया माया देखाउँदैन ।
– 個人事業の開業届出書 (सर्टिफिकेट अफ सोल प्रोप्राइटर) । यो प्रमाणपत्रले तपाई दर्ता भइसकेको फ्रिलान्सर हुनु हुन्छ भन्ने पूष्टि गर्छ ।
तपाईले आवेदनका साथमा के के कागजातहरु पेश गर्नु पर्छ भन्ने थाहा पाउन तपाईको नजिकमा रहेको इमिग्रेशन अफिशमा शुरुमै गएर सोध्न पनि सक्नुहुन्छ । विदेश मामिला मन्त्रालयले प्रक्रिया चलिरहेको बेलामा तपाईसँग थप कागजात/सूचनाहरु पनि माग्न सक्छ । तपाईको भिसा आवेदन सल्टिन ३ महिनासम्म लाग्न सक्छ भन्ने कुरा चाँहि ध्यानमा राख्नु होला ।
विस्तृत जानकारीका लागि कुनै राम्रो इमिग्रेशन वकिल वा सिधै इमिग्रेशन ब्यूरोमा गएर परामर्श लिन सक्नुहुनेछ ।
नोटः यो सामान्य जानकारीका लागि तयार पारिएको हो । भिसा आवेदकहरु स्वयम् आवेदनको लागि जिम्मेवार हुनेछन् । यो लेखमा दिइएको जानकारीहरुमा अधिकारीहरुले हेरफेर गरेका रहेछन् भने हामी जिम्मेवार हुनेछैनौं ।
Prevजापानमा रहँदा विपत्तिको समयमा प्रयोग गर्नैपर्ने मोवाइल एपहरु
Nextजापानमा फेसबुकमार्फत ठगींदै नेपालीहरु, यसरी जोगिनुहोस्